Akhriso:- Sababta Kante u diiday in uu ku biiro Kooxda PSG - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Akhriso:- Sababta Kante u diiday in uu ku biiro Kooxda PSG
Akhriso:- Sababta Kante u diiday in uu ku biiro Kooxda PSG
Laacibka qadka dhexe ee kooxda Chelsea Kante ayaa shaaca ka qaaday sababihii ka dambeeyay go’aankiisa uu ku diiday inuu u dhaqaaqo kooxda Paris Saint-Germain, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay sii joogistaanka galbeedka London.
PSG ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inay u dhaqaaqdo 28-sano jirkan xilli ciyaareedyadii la soo dhaafay.
Sida ay soo warinayso shabakadda Goal, kooxda heysata horyaalka faransiiska waxay diyaar u ahayd inay dalab ka gudbiso ciyaaryahanka qadka dhexe bishii July 2018 ka dib qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee uu soo bandhigay intii lagu jiray tartankii koobka adduunka ee ka dhacay Russia.
Chelsea ayaa ka cago jiideysay inay ka fiirsato dalab kasta oo ay u soo bandhigto ciyaaryahanka kooxda PSG.
Blues ayaa xitaa soo bandhigtay qandaraas cusub oo Kante isbucii ku qadanayo 260 kun ginni ssi ay kaga hortagaan kooxaha doonaya, iyadoo ciyaaryahanka uu ugu dambeyntii qalinka ku duugay qandaraas cusub oo shan sano ah bisha November 2018, isagoo u hibeeyay kooxda inuu lasii joogo ilaa xagaaga 2023.
Taasi waxay si kumeel gaar ah u joojisay wararka xanta ah, iyadoo PSG lagu soo waramayo inay diyaar u tahay inay dalab cusub ka gudbiso Kante xagaaga.
Laacibkii hore ee Leicester ayaa qirtay inuu fursad u helay inuu u dhaqaaqo caasimada Faransiiska laakiin wuxuu ku adkeystay inuu sii joogo London.
Mararka qaarkood daruuri uma aqaanno meesha aan rabo inaan aado. Laakiin waan ogahay waxa aan haysano. Waan ogahay inaan joogayo Chelsea halkaasna waan ku fiicanahay, ”ayuu u sheegay Canal Plus.
“Haddii aanan dooneynin inaan aado PSG waxay ii aheyd xulasho isboorti. Waxaan ku fiicanahay London, mashruuca halkaan waana ku faraxsanahay.
Taageero yar ayuu heystay markii Kante uu u dhaqaaqay Leicester isagoo ka soo tagay Caen xagaagii 2015, laakiin wuxuu cadeeyay inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican taariikhda Premier League markii uu wacdaro ka dhigay kooxda dabacooyinka.
Wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray guushii naxdinta laheyd ee Foxes ku qaaday Premier League sanadkii 2016 ka hor inta uusan markale la qaadin Chelsea xilli ciyaareedkii xigay, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ku guuleysta horyaal Ingiriis ah isagoo kusugan kooxo kala duwan tan iyo markii Eric Cantona uu sidaas ku sameeyay Leeds iyo Manchester United 1992- 93.
Previous articleWafdi gaaray Garoowe & Axmed Karaash oo la kulmay
Next articleMan United oo soo bandhigtay tababaraha bedeli kara Ole Gunnar Solskjaer
RASMI: Man United Oo Magacowday Liiska 30ka Xiddig Ee Uga Qeyb Galaya Europa League & Xiddig Weyn Oo Laga Soo Tagay
Kooxda Arsenal oo ku guuleysatay Koobka FA Cup-ka
Xiddigii Real Madrid Ee Laga Helay Korona FayrasOo Soo Hadlay Iyo Kulanka Champions League
Mike Tyson oo ciyaaraha feerka dib ugu soo noqonaya
Sidee ayay u dhacday xafladii Liveroool, Rikoorradii ay sameysay xili ciyaareedkaan?
Man United Oo Loo Soo Dirsan Doono Biil SAGAAL Milyan Ah Haddii Ay U Soo Baxaan Champions League & Fernandes Oo U Sabab Ah
DHAGEYSO: Warka Habeen 4-8-2020
DHAGEYSO: Warka Duhur 4-8-2020
DHAGEYSO: Warka Subax 4-8-2020
DHAGEYSO: Warka Habeen ee Radio Risaala 03-08-2020
Daawo:- Aragtida Shacabka Muqdisho iyo xilka qaadisii Kheyre
Madaxweynaha Puntland oo xariga ka jaray Mashaariic laga hirgaliyay Goldogob
Madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xariga ka jaray dhismaha Saldhiga dhexe ee degmada Galdogob iyo Suuq casri ah oo degmada laga...